Voice of the Voiceless: With Emphasis on Oromo in Horn of Africa: Wal muddaan siyaasaa Oromoo fi Wayyaanee gidduu jiru hundee gad fageeffataa deemaa jira
Wal muddaan siyaasaa Oromoo fi Wayyaanee gidduu jiru hundee gad fageeffataa deemaa jira
(Yaya Beshir/ Boruu Barraaqaa irraa)
Wal muddaan siyaasaa Oromoo fi Wayyaanee gidduu jiru hundee gad fageeffataa deemaa jira. Keessattuu dubbiin jajjabduun gara dhimma aangoo biyyattiin wal qabatutti xiyyeeffachaa jirti. Kanaaf jecha Wayyaaneen qalbii ummata Oromoo giddu galeessa irraa gara xarafaatti deebiftee ofii qehee keessaa wantoota gufuu itti tahan of duraa qulqulleeffachuuf hojjechuu barbaaddi. Wanni weerarri waraanaa Harargee irratti akkas jabaataa dhufeefis kanumaan wal qabata jedheen yaada.
Daangaalee Oromiyaa biroo (Fakkeenyaaf, gama Afaarriin, gama Kibbaa fi gama Dhihaan) weerara nurratti hammeessuuf lafa jala itti jirti. Kun hundi qalbii keenya guutummaatti moggaa biyyaa (peripheral lands) irratti deebiftee ajaja masaraa giddu galeessaa (central command) jajjabeeffachuufi. Walumaa galatti tarsiimoo qabsoon Oromoo haarayatti horachaa deemaa jirtu facaaftee bittaa sirna ishii itti fufuuf yaalii gochuu maltu hundumaa dursinee harkatti bacancarsuu feesisa.
Akka fakkeenyaatti wantoota godhamuu qaban keessaa muraasa:
1. Finfinneen akkuma handhuurummaa isaa wiirtuu qabsichaa tahuun akka hin dagatamne, Masaraa Finfinneetii harka diinaa jiruu Oromiyaan gonkumaa nagaa hin argattu.
2. Qondaalonni OPDO gurguddaa fi ummata Oromoo biratti jaalala horataa jiran of-eeggannoo jabeessuu qabu. Wayyaaneen amma saree maraatte taatee jirti. Ishii amananii eegumsa tikaa gahaa malee bakka fedhetti waliin walgahii taa'uun yeroo kanatti amansiisaa miti.
3. Kutaalee Oromiyaa Wayyaaneen itti duulaa jirtu baraaruuf deeggarsi jabaatee akka itti fufu,
4. Xiyyeeffannoo Wayyaanee gargar facaasanii bittinneessuuf jecha kutaa Oromiyaa mara keessatti fincilli dhoohee lafa sochoosuu qaba.
5. Meeshaan waraanaa gurguddaas tahee xixiqqaan dachii Oromiyaa keessatti kuufamee argamu toyannoo MNO jala hatattamaan galuu fi yoo barbaachisaa tahe Poolisa Oromiyaa (PO) fi Foollee Oromoo (FO)f qoodamee ajaja PO tiin taliigamuu feesisa.
6. Ilmaan Oromoo Humna Ittisaa keessatti sadarkaa guddaa hanga xiqqaatti jiran Oromiyaaf dirmachuun amma akka tahe qaama dhimmi laaluun qajeelfamni dabruufii feesisa.
7. FO hanga ammaatti jaarame irratti dargaggoonni Oromoo kumoota kudhanootaan itti dabalamanii Foollummaadhaan jaaramuun dirqama. Foolleedhaaf leenjiin waraanaa idilee hatattamaan qophaaweefii PO wajjin harka wal qabatanii Oromiyaa toyachuuf qophaahuu qabani. Injifannoon qabsoo Oromoo falmaa hidhannoon alatti dhufa jedhanii eeguun gonkumaa hin danda'amu waan taheef.
Walumaa galatti akka bal'ina lafa keenyaa fi guddina saba keenyaattii bakka hundaa fi bifa hundaan yeroo tokkotti yoo itti kaane waan qabattuuf gadhiiftu ishee wallaalchisuutu danda'ama.
Posted by Hasan Ismail at 6:17 AM
OROMOON SIRNOOTA MALEE SABOOTA IRRAA JIBBA HIN QAB...
"Qabsoon Simeetii osoo hin taane silleetiidha" Poo...
This is the story (failed attempt):
HUBACHIISA! Yeroo ammaa kanatti Wayyaaneen bifa d...
Tokko tokko immoo “Oromoon bilisummaatti dhiyaatee...
Miidhaa dhiisanii miidhamaa balaaleffachuun cubbuu...
Wal muddaan siyaasaa Oromoo fi Wayyaanee gidduu ji...
AbbaaDuulaa Gammadaa: Ganamaan hirribaa dammaqee a...
Jimaa Oromiyaa keessaa akka uumaafi seeratti kan i...
Tarkaanfiiwwan jajjabduu waggaa tokko keessatti fu...
Bara Mootummaan Naannoo Oromiyaa murtii fi qajeelf...